Iimowudi zokuDibanisa iFotohop: Ungazisebenzisa njani ngokuchanekileyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuba asizizo iingcali, kwaye khange sifunde i-photoshop, ezinye zezinto zobugcisa yenkqubo asizukuyiqonda ngokuchanekileyo. Nangona siyazi ukuba siyisebenzisa ngandlela thile. Sivavanya iprojekthi kwaye oku kusenza ukuba silibazise ukuhanjiswa kwethu kokugqibela. Nokuba kukuyizisa okanye ukubona isiphumo sayo xa kuziwa emsebenzini wakho. Inkqubo yethu iyaxakaniseka kwaye imizamo embalwa esiyenzayo yokufika apho, kokukhona iziphumo ziya kuhlala ziphumelela. Oku kuhlala kusenzeka ngeendlela zokudibanisa i-Photoshop.
Kwaye kukudibanisa ngokuchanekileyo umaleko osebenzayo kunye nezinto zomaleko wangaphambili kuyabhida. Ngokuqinisekileyo abanye benu bazamile ngaphambi kokufumana isitshixo nabanye njengokucacisa, iploti, njl. Kwaye awusiphumelelanga isiphumo esibonileyo. Okanye zama izifundo zevidiyo ezithi ngokulandela amanyathelo usondele kwisiphumo osifunayo, kodwa azichazi ukuba kutheni.
Ngokomgaqo, ezi mpawu zilawulwa ziindlela ezintathu ezisisiseko: Umbala wesiseko ehambelana nombala wokuqala womfanekiso ophambili, dibanisa umbala ngombala oza kuwusebenzisa (njengebrashi) kunye umbala wokugqibela efumaneka nje ukuba usifumene isiphumo. Oku kwaye sinombulelo kubalo lwemathematika olwenziwa kwisicelo, siphumelela iziphumo ezahlukeneyo kwimowudi nganye ekhoyo.
Ezi zizonke ezingamashumi amabini anesixhenxe ezinto ezahlukileyo ezenziwa yifotoshop giant. Kwaye oku kuyakufuneka ukuba siququzelele ukuya kwiindlela ngeendlela ezintandathu ezahlukeneyo.
Siza kusebenzisa umfanekiso ofanayo kuyo yonke into, eya kuba yile ilandelayo:
Njengoko igama libonisa, indlela yokudibanisa eqhelekileyo. Olu khetho lokuqala lusetyenziswa ngokungagqibekanga kulo naluphi na umaleko esilwenzileyo. I-pixel yoqobo nganye kwisiseko sefoto ithathelwa indawo ngumbala wokugqibela. Oko kukuthi, ukuba usebenzisa ibrashi, iya kuyifihla into ekumaleko asezantsi, igubungela yonke into ngokupheleleyo ukuba i-opacity yi-100%.
UkunyibilikaOlunye ukwenziwa kudidi esilubiza njengesiqhelo. Nangona uthoba i-opacity uza kubona ukuba omnye umfanekiso unyibilika njani ungaphaya komnye. Ngokungahleliwe buyisela iipekseli ngombala osisiseko okanye umbala wokudibanisa
KumnyamaUya kukhetha ezona pixels zimnyama kuzo zombini isiseko kunye nomaleko wokudibanisa. Ukuba ubonakalisa mnyama kwimvelaphi emhlophe nge-fusion emnyama, eyona imnyama iya kuba ngabantsundu kwaye ke iya kuthatha indawo yayo yonke into. Ukuba uthatha isigqibo sokwenza ngebrashi, iya kutshintsha indawo ezikhanyayo kunye nezimnyama. Oku kuthetha ukuba 'idabi' leepekseli liphumelela okona kumnyama.
Ngokuphindaphindiweyo: Phinda imibala emibini. Nangona ngaphambili, kwaye ukudidi 'loMnyama', jonga owona mnyama umnyama njengowona uphambili. Ke ukuba udibanisa into nomnyama, indawo leyo iya kuba mnyama kwaye ukuba uyixube nomhlophe, iindawo ezimnyama azizukutshintsha. Umbala wokugqibela uya kuhlala umnyama.
Umbala weSubexpose: Njengoko ubona kulo mfanekiso ulandelayo, ithoni ephakathi kodwa egcwalisiweyo ifezekisiwe. Yandisa umahluko kakhulu. Kwaye njengangaphambili, ukuba uyidibanisa nomhlophe, akukho siphumo senzekayo. Kungenxa yoko le nto icandelo lamacala libukeka libukhali kwaye indawo apho kufunyenwe i-gradient emnyama, ijongeka ngathi igcwele kakhulu.
Ukuboniswa okungaphantsi komgca: Eli nqaku linokukunceda ngakumbi kunangaphambiliNgokuphindaphindiweyo'kwaye'Ukuboniswa kombala ', kuba ikwafezekisa imibala emnyama kunaleyo yangaphambili, kodwa ngaphandle kokutshisa ifoto okanye ukuyigcwalisa njengangaphambili.
Umbala omnyama: Asiyi kuyeka ixesha elide kule ndlela kuba isebenza ngokufana nemowudi emnyama. Faka ezona pixels zincinci kwezona zimnyama. Oko kukuthi, ukuba unamaphikseli, umzekelo, aqala nge # FF349 aya kugutyungelwa ngamaphikseli ngekhowudi # 00349. Kuba ezo ziqala nge-FF zilula (umbala omhlophe: #FFFF) kwaye ezo ziqala nge-00 (Umbala omnyama: # 0000).
CacisaNgokuchasene noko sele sikubonile ukuza kuthi ga ngoku, kwidabi lemibala, kule meko, ezimnyama ziya kutshintshwa kukukhanya. Ezi aziyi kuguqulwa kwaye ezimnyama ziya kutshintshwa. Ukuthelekisa iipikseli nganye nganye hayi iyonke. Ukuba uyayifuna ikhaphukhaphu ngakumbi, kuya kufuneka ulinde imowudi elandelayo 'yoLuhlu lweMibala' kwaye mhlawumbi uya kuyifumana into oyifunayo.
Isicwangciso: Iyafana kakhulu nendlela 'Yandisa' kodwa kule meko ukubuyela umva. Phinda-phinda ukujika kombala wesiseko kunye nokujika kombala wokudibanisa. Yiyo loo nto ukushiya umbala ukhanyise ekugqibeleni. Ukuba uwuxube ngombala omhlophe, uya kuhlala umhlophe kwaye ukuba uxuba umnyama, akusayi kubakho lutshintsho.
Kule meko, ukunika ingqiqo ngakumbi kwifoto kwaye uchaze isiphumo ngakumbi, ndikhethe umgca wokulinganisa kunye ne-gradient eguqulweyo. Ngempembelelo yobhedu yegradient eza ngokungagqibekanga kwi-Photoshop CC.
Umbala weDodge: Siyaqhubeka nokuguqula imeko kwaye ngeli xesha ngumbala osisiseko oya ukhanya ngokulula ukufumana umbala wokudibanisa ophantsi. Ngeli xesha, ukuba uyayixube nomnyama, ayivelisi siphumo.
Kumzekelo, igradient yobhedu idala iziphumo zexesha elizayo. Ukuba uzama ezinye iintlobo zegradients, unokumangaliswa.
Umda weDodge (Yongeza)Umbala wesiseko uya kukhanya (umfanekiso wezakhiwo kule meko) kwaye umbala wokudibanisa wongezwa ngokuqaqamba. Sithetha ngokucacileyo, ngemibala enje ngobhedu wegradient esiwunike kwiimpawu zangaphambili. Ukuba ukongeza ngombala omnyama, awuzukuvelisa naluphi na utshintsho.
Umbala okhanyayo: Ukuba ufuna ukwenza isiphumo esinokunika olunye uguquko kwifoto kodwa oko bekungazukubonakala, nantsi unayo. (Ukuba khange ulindele kwaye weqe inyathelo). Faka ezona pixels zimnyama endaweni yezikhanyayo. Ngokwenyani uyawushiya umfanekiso njengowokuqala, nangona usenza i-gradient ye-B / W, umnyama ukhanyisiwe kwaye ushiya usasazo olusezantsi kakhulu.
Ukugqitha: Eli nqaku linokhetho olunambini ngokuxhomekeke kwixabiso lesiseko somfanekiso (Kule meko, izakhiwo). Kuxhomekeke kumbala wayo wesiseko, siya kufumana iindlela ezimbini ezifanayo, Phinda-phinda uze wenze iyelenqe. Ukuba isetyenziselwa amaxabiso akumgangatho osezantsi iya kufana phinda-phinda kwaye ukuba ikumaxabiso aphezulu iyakwenziwa ngokufana ne itrama.
Ukukhanya okuthambileyoYeyona ndiyithandayo, ilinganisa ukukhanya kokukhanya. Kuxhomekeke kumbala owusebenzisayo, yenza umfanekiso ube mnyama okanye ukhanyise. Ukuba umbala ungaphantsi kwama-50% grey, uya kukhanya ngokukhanya. Ngokuchasene noko, ukuba iqulethe ngaphezulu kwe-50% iya kuba mnyama. Ukuba usebenzisa umnyama omsulwa (# 0000) okanye umhlophe (#FFFF), isiphumo siya kukhanya ngakumbi okanye sibe mnyama.
YomeleleIsebenza ngokufana Ukululeka yintoni enye, ukudibana. Ngamaxabiso asezantsi, umfanekiso uya kubonakala ubumnyama, kwaye ungachazwanga. Ngamaxabiso aphezulu, iya kucaciswa ngakumbi kwaye icace gca.
Kakhulu: Ikhanyisa okanye ibe mnyama ngokuxhomekeka kwi- umahluko okwahlukileyo. Njengangaphambili, ukuba ingaphantsi kwe-50% ingwevu, iya ikhanya kwaye ngokuchaseneyo, ukuba ingaphezulu, iba mnyama.
Ukukhanya komgcaNgeli xesha, ukukhanya komgca wokukhanya kuya kuba lula okanye kube mnyama kuxhomekeke kwi umahluko wokukhanya. Ukubala ngepesenti yegrey esetyenziswe emfanekisweni.
UkugxilaKuxhomekeke kumbala odibeneyo, umbala utshintshiwe. Ngaphezulu kwama-50% mnyama kwaye ukuba iqulethe okuncinci, iyakhanya. Ukuba imibala yokudibanisa imnyama iya kubonakala kumxube wakho, ukuba zikhaphukhaphu ziya kunyamalala.
Nangona isenokungabonakali iluncedo emfanekisweni, ukuba uyakwazi ukongeza iithoni okanye iziphumo kwaye unciphise ukusebenza kwayo, ungafezekisa iziphumo ezintle kumfanekiso wakho.
Umxube ochaziweyo: Hlanganisa imibala yomibini. Isiseko kunye nokudityaniswa ukubonelela ngokukhanya okukhanyayo okanye umbala omnyama, kodwa uhlala ugcwele kakhulu. Ukudityaniswa komhlophe okanye mnyama akunampembelelo.
UmahlukoKuxhomekeke kwelona xabiso liphezulu lokuqaqamba, uthabathe umbala wokudibanisa kumbala wesiseko okanye ngokuchaseneyo. Kwezi ntlobo zeempawu, kuya kufuneka udlale ngokungacacisi, gcwalisa kunye nezinye iiparameter eziya kuthi zinike isiphumo esifanelekileyo seprojekthi yakho, ukuba uyidibanisa yodwa, isenokungabi sisiphumo ofuna ukusibona.
Ukukhutshelwa ngaphandle: Ukubonelela ngemowudi egudileyo kunomahluko odlulileyo, nangona ufana kakhulu. Ukudityaniswa kwemhlophe kuguqula ulwazi lwe-chromatic yombala osisiseko kunye nomnyama, akukho siphumo senzekayo.
ThabathaThabatha umaleko ophezulu (onokuba yimowudi yokudibanisa) kumbala ophambili (onokuba ngumfanekiso)
Yahlula: Yahlula-hlula, ngokungathi lulingano lwezibalo, umbala oza kudityaniswa nefoto ephambili.
Ithoni: Ukudibanisa ukukhanya kunye nemibala yokugcwalisa ifoto kunye neethoni yombala womxube.
Ukuzaliseka: Ngokuchasene ne ithoni idibanisa ukukhanya kunye neethoni yombala wesithombe kunye nokugcwala kombala wokudibanisa.
umbala: Yenza umbala obangelwayo ngokukhanya kombala ophambili wefoto kunye nokugcwala kunye nemibala yomaleko wokudibanisa. Iluncedo ngakumbi ukuba ufuna ukufaka imibala kwimifanekiso yemonochrome.
UkukhanyaIdibanisa ukugcwala kunye nemibala yomfanekiso ophambili kunye nokukhanya kombala odibeneyo. Yenza iziphumo eziguqukayo kwimowudi yombala
Ukuba ngoku uthatha isigqibo sokuchitha ixesha ukhetha nganye yeendlela de ufumane eyona ilungileyo, kungenxa yokuba ucinga kufanelekile ukwenza njalo. Ndiyathemba ukuba ngeli nqaku, Khawuleza ubone nayiphi na indlela yokudibanisa oyifunayo, ngaphandle kokulahlekelwa yiminwe yakho ucofa enye kwenye.
Ukufumana umzekelo weefoto, ukuba ufuna ukubona iziphumo zakho, zikhuphelele Unsplash
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iindlela zokudibanisa: ungafunda njani ukuzisebenzisa ngokuchanekileyo
Iifoto zeFotohop Simahla